यी राशि भएका पुरुषले आफ्नी पत्नीलाई गर्दछन् अथाह माया, हरेक दुखमा दिन्छन् साथ – Sandesh Press
यी राशि भएका पुरुषले आफ्नी पत्नीलाई गर्दछन् अथाह माया, हरेक दुखमा दिन्छन् साथ
November 18, 2020 343
काठमाडौँ । राशि अनुसार मानिसका व्यवहार र स्वभाव फरक हुने गर्छ । जुन सुकै युवतीमा पनि आफ्नो जीवन साथी उत्कुष्ट होस् सबै कुरामा राम्रो देखियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । यसका साथै जीवन साथीले धेरै माया गरोस भन्ने हरेक युवतीको चाहना हुन्छ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यी राशिका पुरुषले पत्नीलाई अथाहा माया गर्छन ।
सिंह राशि : यो राशीका पुरुषहरुले आफ्नो पत्नी प्रति धेरै वफादार हुन्छन् । आफ्नो पत्नीको खुसीका लागि जस्तो सुकै सुखलाई पनि त्याग्न गर्न तयार हुन्छन् । यी राशिका पतिहरु रोमांटिक किसिमका हुन्छन् ।
मकर राशि : यो राशिका पुरुषहरु पत्नीलाई निकै सम्मान दिने किसिमका हुन्छन । पत्नीको भावना छिट्टै बुझ्ने प्रवृधिका हुन्छन् । उनीहरुमा सकारात्मक व्यवहार मात्र नभई आफ्नो पत्नीको चाहना नभनी थाहा पाउने खालका बानी हुन्छ यी राशि हुने पुरुषमा । यो राशिका पुरुष पत्नीलाई छोडेर टाढा वस्न सक्दैनन् । र आफु गएको ठाउमा पत्नीलाई पनि सँगै लैजाने किसिमका हुन्छन् ।
कन्या राशि : यी राशिका पुरुषहरु भावनात्मक हुने गर्छन् । पत्नीलाई अत्याधिक माया गर्ने हुँदा यी राशि हुने पुरुषहरु जस्तो सुकै दुख गर्न पछि हट्दैनन् । यी पुरुषहरु जस्तो सुकै दुख पनि पत्नी देखि लुकाउन पछि पर्दैनन् । यीनिहरु पत्नीलाई सुख दिलाउन जीवनभरी कोशिस गर्छन । यी राशिका पुरुषहरु पत्नीको भावना छिट्टै बुझ्ने र पत्नीले भनेको जस्तो सुकै काम गर्न तयार हुने गर्छन
Prevराजेन्द्र खड्गीको रिपोर्टमा एचआइभि पोजेटिभ !
Nextपोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटना
अन्जु पन्त र थिर कोइराला बैवाहिक जिवनमा बाधिन्नु भएकाे छ
लक्ष्मी गदालले मा’फी माग्दै भनिन- ‘यो सबै नाटक हो किशोरसंग १० लाख माग्ने प्लान थियो !
नेपालमा नयाँ खालको कोभिड–१९ को भाइरस भित्रियो, बिरामीहरु सिकिस्त हुन् थालेपछि डाक्टरले दिए सर्वसाधारणलाइ यस्तो सूचना !